xisaabaadka kharash garaynta dabacsan
Akoonka Kharashka Jilicsan ee Caafimaadka (FSA) waa akoon faa'iido cashuureed ka hor oo ay shaqaaluhu ku shubaan lacag taas oo loo isticmaali karo in lagu bixiyo kharashyada daryeelka caafimaadka jeebka ka baxsan, cashuur la'aan. Koontada Kharashka Dhaqaale ee Dareemi kara ee Daryeelka (DFSA) ama koontada dib u bixinta daryeelka ku-tiirsanaanta, waa koontada faa'iidada pretax ee loo isticmaalo in lagu bixiyo adeegyada daryeelka ku tiirsanaanta, sida daryeelka ilmaha, dugsiga barbaarinta, iyo barnaamijyada dugsiga ka hor ama kadib.
Waxay dhimaysaa cashuuraha mushaar bixinta
Fududeynta maamulka Waxay hagaajisaa niyadda
Waxay wanaajisaa caafimaadka, iyada oo loo marayo helitaanka daryeel caafimaad oo kordhay, oo ay ku jirto helitaan weyn oo daryeelka aasaasiga ah, baarista ka hortagga, daryeelka ambalaaska, daawooyinka dhakhtar qoro, iyo daryeelka cudurrada daba dheeraada; u hoggaansanaanta daawada weyn; iyo heerarka sare ee cudurka
Waxay wanaajisaa dheelitirka shaqada/nolosha
Kiis daraasaad: Anderson Corporation
FSA-da oo la tijaabiyay iyo run waa qayb muhiim ah oo ka mid ah faa'iidooyinka
Xisaabaadka kharash-bixinta dabacsan ee daryeelka ku-tiirsanaanta (FSA) waxay jireen tobannaan sano, iyo loo-shaqeeyayaal badan ayaa bixiya iyaga oo qayb ka ah faa'iidooyinka guud. FSA waxay u ogolaataa shaqaalaha inay meel dhigaan lacagta pretax bil kasta si ay u daboosho kharashyada daryeelka ku tiirsanaanta ee u qalanta carruurta ka yar 13 sano. Kharashyada waxaa ku jiri kara kharashyada xannaano-maalmeedka caadiga ah, kaamamka xagaaga/maalinta iyo xannaaneeyayaasha. Shaqaalaha leh dad ku tiirsan cashuurta da' kasta oo aan awoodin is-daryeelka ayaa waliba u qalmi kara inay isticmaalaan faa'iidada.
Tammy Parrucci, maareeyaha naqshadaynta faa'iidooyinka shirkadaha ee Andersen Corporation, ayaa sheegtay in helitaanka faa'iidada FSA ay aad uga badan tahay muddadii 21-ka sano ah ee ay shirkadda. Iyadoo laga yaabo inaysan ahayn "cusub oo dhalaalaya," daryeelka ku-tiirsanaanta FSA waa faa'iido inta badan la isticmaalo oo inta badan la mahadiyo, sida uu qabo Parrucci.
"Daryeelka ku-tiirsanaanta FSA waa miro lul-daran marka aad abuurayso barnaamijyo lagu taageerayo shaqaalaha carruurta leh, gaar ahaan jawi shaqaaleysiineed oo tartan leh," ayuu yiri Parrucci. "Andersen, faa'iidooyinka qoyskayaga waa mid aad u ballaaran, waxaanan u aragnaa xisaabaadka faa'iidada canshuurta qayb muhiim ah."
Markii Parrucci bilawday shaqadeeda dheefaha, shaqadeedii ugu horreysay waxay ahayd inay ka baaraandegto lacag-celinta FSA ee Honeywell. Maanta, shirkaduhu waxay kiraystaan maamulayaasha qolo saddexaad ama iibiyeyaal kale si ay u maamulaan daryeelka ku-tiirsan ee FSA iyo xisaabaadka faa'iidada cashuuraha ee daryeelka caafimaadka. Shirkadaha yaryar ayaa laga yaabaa inay la shaqeeyaan dilaaliinta si ay u fududeeyaan faa'iidadan. Andersen waxa ay wada shaqayn la leedahay Optum Bank.
Daryeelka ku-tiirsanaanta FSA waa faa'iido siisa faa'iido cashuureed shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Parrucci wuxuu ugu yeeray "guul-guuleysi." Shaqaalaha, ka qaadashada lacagta cashuurta ka hor (ilaa $5,000 habraacyada Adeegga Dakhliga Gudaha) waxay hoos u dhigtaa dakhligooda la cashuuri karo; shirkaddu waxay kaloo heshaa faa'iidooyin canshuureed.
Parruci wuxuu sheegay in shaqaalaha ka qaybqaata ay si dhab ah u qadarinayaan barnaamijka. Waqti kasta, shaqaaluhu way soo dejisan karaan app-ka, arki karaan waxa ku jira akoonkooda oo waxay soo gudbiyaan codsigooda wakhtiga dhabta ah. Shaqaalaha qaar ayaa xitaa isticmaali kara kaarka deynta, haddii daryeel bixiyaha uu aqbalo. In kasta oo faa'iidada ay tahay mid la mid ah tii Parrucci ay isticmaashay markii ay carruurteedu yaraayeen, helitaanka aad ayay ugu fududahay Optum Bank. Sida urur cusub oo hormood u ah warshadaha, Andersen waxa ay weli ka go'an tahay in ay siiso faa'iidooyin adag oo loo dhan yahay dhammaan shaqaalaha iyo qoysaskooda.
Goobta: Bayport, Minn.
Daryeelka Ku-tiirsanaanta FSA - FSAFEDS (fsafeds.com)
Porter-Rockwell, Brenda. "Sida Loo Sameeyo Barnaamij Koontada Kharashka Dabacsan." Inc.
Handrick, Laura. "Waa maxay Koontada kharash garaynta dabacsan sideese u shaqeysaa?" FitSmallBusiness.com Febraayo 19, 2018